MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA EE SAINT SHEPHERD - EEYAHA
Saint Bernard / German Shepherd Mixed Creed Dogs
Eygayga Max waa weyn yahay. Isagu waa Saint Bernard / German Shepherd mix, oo halkan lagu muujiyey isagoo jira 4 jir. Aad buu u caajis badan yahay. Isagu kuma raaxeysto jimicsi noocuu doono ha ahaadee, wuxuu leeyahay dabeecad aad u wanaagsan, gabi ahaanba waa xariif carruurta iyo kuwa kale eeyaha . Aad ayuu saaxiibtinimo u leeyahay runtii wuxuu u maleynayaa inuu qof walba la ciyaari doono wuuna ku ordaa iyaga. Cabirkiisa awgiis, dadku waxay inta badan ka walwalsan yihiin inuu xumaan doono, oo uusan run isaga ka ahayn.
The Saint Shepherd ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Saint Bernard iyo Adhijirka Jarmalka . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
'Max wuxuu waalan yahay 5 daqiiqo markuu ordayo oo wareegayo wuuna u muuqdaa mid qosol badan maxaa yeelay wuxuu heystaa joonyada St Bernard oo kor iyo hoos u boodaya markuu ordayo ilkihiisuna muujinayaan (sida Hooch oo ka socda Turner iyo Hooch) carabkiisuna kor buu u taaganyahay iyo sidoo kale hoos.
'Max wuxuu jecel yahay inuu seexdo, wuxuu seexan lahaa 22 saacadood maalintii haddii loo oggolaado oo wuu cunaa labada saacadood ee kale. Uma oggolaanayo inuu wax ka cuno xaddigiisa maalinlaha ah maadaama aanan dooneyn inaan culeys saaro xubnaha, kala-goysyada iyo wadnaha iwm. Waa quraafaad in eeyo waaweyn ay tahay inay cunaan casho weyn.
'Max waa qof aad u jecel, saaxiibtinimo leh, doqon ah oo ciyaar badan. Waxaan ka soo korsaday hoyga badbaadinta. Wuxuu joogay 7 bilood wuxuuna lahaa 4 guri intaanan geyn. Milkiileyaashii hore waxay yiraahdeen inuu aad u weynaa oo buuq badan yahay, maxay ka filayaan eey baaxaddiisa leh? Xaqiiqdii ma arki kartid astaamaha adhijirka Jarmalka ah ee isaga u aqbalaya midabkiisa. '
'Max ayaa si aad ah wax u badan, waxaan ka fiiqaa bishiiba hal mar oo aan cadayaa maalin kasta si aan uga soo saaro timo duug ah / dhimatay oo aan u nadiifiyo maadaama ay macquul tahay in la geliyo qubeyska.'
'Tani waa Diablo. Hooyadiis waxay ahayd Nadiif Sheybaar Jarmal ah oo aabe ah oo aabbe wuxuu ahaa Nadiif Nadiif ah Coat Saint Bernard. Isagu waa eeygii ugu jacayl badnaa abid. Kaliya waa 4 bilood jir sawirkan wuxuuna durbaba culeyskiisu yahay 52 rodol.
Diablo the Saint Shepherd oo ah eey yar oo jirta 5 toddobaad
Isku soo wada duuboo Saint Bernard / Shepherd German ayaa isku dhex jira qiyaastii 4 sano jir oo u boodaya toy. Akhriso sheekada Wally
Eeg tusaalooyin badan oo ka mid ah Shepherd Saint
Saint Shepherd Dog Sawirada Taranka 1
buuxa eeyaha chow chow
bluetick basset coonhound isku darka hound
i tus sawir eey schnauzer ah
feeder pitbull mix puppy sawiro